Ukurhweba ngeBitcoin ukuThengisa njani iBitcoin ngenzuzo ngoJanuwari 2022! - Funda ukuRhweba oku-2
Ukurhweba ngeBitcoin -Urhwebo lweBitcoin kunye neeNqonga eziPhambili zeNtengiso ze-Crypto 2021
Kwixesha elingelide kangako, i-Bitcoin-eyokuqala kunye ne-de-facto cryptocurrency yehlabathi, yayingeyonto eyenye ngaphandle kwepipayream yonjiniyela. Ngokukhawuleza ukuya ku-2021 kwaye imali yedijithali ngoku iklasi yee-asethi eziibhiliyoni ezininzi.
Ayisiyiyo kuphela into onokuyithenga, uyithengise kwaye uthengise iBitcoin kwi-cryptocurrency exchanges yomntu wesithathu, kodwa iklasi yeasethi ngoku inentengiso epheleleyo, elawulwayo.
Qaphela, ngelixa ukurhweba kweBitcoin kuya kusanda kwindawo ye-Intanethi, iseyinto ekucingelwa ukuba iyenzeka kwaye ayizinzanga. Ngapha koko, ayiqhelekanga into yokuba imali yedatha inyuke okanye yehle ngexabiso elingaphezulu kwe-10% ngosuku olunye.
Nangona kunjalo, ukuba ujonge ukufumanisa ukuba ungayifumana njani ikhono lotyalo-mali kwi-cryptocurrency ngeenyawo zasekunene-qiniseka ukuba ufunda ngokunzulu Isikhokelo sokuThengiswa kweBitcoin. Ngaphakathi kuyo, sigubungela i-ins kunye nokuphuma kwendlela esebenza ngayo urhwebo lweBitcoin, yeyiphi imingcipheko ekufuneka uyiqwalasele, uyenza njani imali, ngawaphi amaqonga ekufuneka uthengise kuwo, kunye nokunye.
Qaphela: Ukuba ujonge ukurhweba nge-Bitcoin okwethutyana kwaye ke-ufuna ukhetho lokuthenga kunye nokuthengisa ngokucofa iqhosha, ungangcono urhwebe ii-CFD.
Zithini iinzuzo kunye neengozi zokurhweba ngeBitcoin?
Ngenisa imakethi entsha esele isencinci
Iibhiliyoni zeepawundi ezixabisekileyo zeBitcoin zithengiswa mihla le
Iimarike zeBitcoin zivulekile 24/7
Amakhulu amaqonga orhwebo lweBitcoin ngoku kwimarike
Abanye abarhwebi bayakuvumela ukuba uthengise i-Bitcoin CFDs ngaphandle kwentlawulo
Enye yeeklasi zee-asethi eziqikelelweyo kwibala lezemali
phambi kokuba Siphonononga izinto ezithile zokurhweba ngemali yedijithali, masiqiniseke ukuba siyayiqonda into eyiyo i-Bitcoin. Kwindlela yayo esisiseko, i-Bitcoin yimali yedijithali eyathi yenziwa ngumqambi ongaziwayo ngo-2008. Itekhnoloji esisiseko ibizwa ngokuba yi-'blockchain ', kwaye ivumela inkqubo yeBitcoin ukuba isebenze ngendlela' eyabelweyo '.
Ngokwemigaqo, oku kuthetha ukuba akukho mntu okanye igunya elilawula uthungelwano lweBitcoin, kwaye nemali ngokwayo ayixhaswanga ngurhulumente okanye ibhanki esembindini. Ngokuchasene noko, intengiselwano iqinisekisiwe kwaye yaqinisekiswa 'ngabasebenzi mgodini'. Nabani na onokuba ngumgodini weBitcoin ukuba nje unesixhobo esifunekayo sehardware.
Ukubuyisa igalelo lentsalela yombane, abasebenzi basezimayini abaphumeleleyo bavuzwa ngeBitcoin. I-Bitcoin njengemali iyinyani, oko kuthetha ukuba ayikho kwifom ebonakalayo njengePound okanye idola yaseMelika. Endaweni yoko, yonke intengiselwano kunye neebhalansi zeakhawunti zigcinwa kwi-blockchain- engaphenduliyo kuphela kwizisongelo zokungaziphathi kakuhle, kodwa iququzelela ugqithiso olungaziwayo, olukhawulezayo nolungabizi kakhulu.
Ngale nto ithethwayo, elona cala lokusebenzisa liphakathi kweli nqanaba belilelokucinga. Kungenxa yoko le nto ngoku iklasi yezigidi zeepawundi ezinokuthengiswa ngabo babathengisi kunye nabathengi beziko.
Yintoni iBitcoin Trading?
Ukuba iasethi inexabiso, kunokwenzeka ukuba indawo yentengiso enokuthengiseka ikhona. Nokuba yile oyile, igolide, ingqolowa, iswekile, okanye iinkozo- uninzi lwezinto ezifumana ixabiso zingathengwa kwaye zithengiswe ngabatyali mali-ngeyona njongo iphambili yokwenza imali. Le ngcamango ayihlukile kwimeko yeBitcoin kunye nezinye i-cryptocurrencies.
Kananjalo, ngoku unokurhweba ngeBitcoin ngendlela efanayo onokuthengisa ngayo nayiphi na enye iklasi yeasethi. Ngale nto ithethwayo, ukurhweba ngeBitcoin kukwafana nokuthengisa kwangaphambili, kude kube ngoku uya kuthengisa iBitcoin ngokuchasene nenye imali. Oku kunokuba yimali ye-fiat njenge-GBP, i-USD, okanye i-EUR, okanye ngokuchasene nenye imali yedijithali efana ne-Ethereum kunye neRipple.
Qaphela: Nangona iBitcoin inekhowudi yemali 'BTC', amanye amaqonga asebenzisa 'i-XBT' endaweni yoko.
Nangona kunjalo, eyona nto inkulu kunye neyona ilulwelo yeBitcoin yokubhangqa yile yedola yaseMelika. Ngapha koko, ngexesha lokubhalwa kwesi sikhokelo- intengiso ye-BTC / USD iququzelele urhwebo olungaphezulu kwe- $ 23 yezigidigidi ngeeyure ezingama-24 kuphela. Kananjalo, nokuba ujonge ukurhweba iipawundi ezimbalwa okanye amanani amathandathu-kunemali eyaneleyo yokuhambahamba.
Masithi jonga indlela urhwebo lweBitcoin olunokusebenza ngayo.
Ugqiba kwelokuba uthengise iBitcoin ngokuchasene nedola yaseMelika, kuba le yeyona ndawo yentengiso inkulu kwindawo.
I-Bitcoin okwangoku ixabisa i-10,000 yeedola- nangona uziva ngathi kukonyuka amaxabiso kwixesha elifutshane.
Kananjalo, ubeka 'i-odolo yokuthenga' kwi-BTC / USD iperi kwi-500 yeedola
Ngaphezulu kweeyure ezingama-48 ezizayo, iBitcoin inyuka iye kwi-12,000 yeedola- emele iipesenti ezingama-20 kwinzuzo
Njengoko utyale imali eyi- $ 500, iinzuzo zakho ezingama-20% zikubekele inzuzo eyi- $ 100
Qaphela: Nangona i-BTC / i-USD idityaniswe nedola yase-US, umthengisi wakho wase-UK usengaguqula inzuzo kunye nelahleko kwiPound Sterling.
Ungathengisa njani iBitcoin?
Ukuze uthenge, uthengise kwaye uthengise iBitcoin-kuya kufuneka usebenzise iqonga lesithathu. Kuxhomekeka kuhlobo lolwakhiwo lweasethi onqwenela ukutyala imali kulo, oku kunokuba yingcali yokutshintshiselana nge-imali yedatha okanye umthengisi weCFD olawulwayo. Ngokubalulekileyo, oku kuyakuxhomekeka ekubeni uceba ukuthengisa iBitcoin ngexesha elifutshane /urhwebo usuku isiseko okanye bambelela kutyalo-mali lwakho lwexesha elide.
Kananjalo, apha ngezantsi siqhekeze iindlela eziphambili ezikuvumela ukuba ubandakanyeke kurhwebo lweBitcoin.
Ukurhweba ngeBitcoin nge100% yobunini
Ukuba ujonge ukurhweba ngeBitcoin ngeyona ndlela inzima, kuya kufuneka uqale uthenge imali yedijithali. Nangona siza kuchaza ukuba isebenza njani le nkcukacha ngakumbi ezantsi, kuya kufuneka usebenzise umntu wesithathu otshintshiselana nge-imali yedatha enelayisensi yokwamkela idipozithi yemali ye-fiat.
Oku kuyakuvumela ukuba usebenzise i-debit / ikhadi lekhredithi okanye ugqithiselo lwebhanki ukuthenga iBitcoin, apho unokurhweba kunye nezinye iimali. Nje ukuba uphethe i-Bitcoin, unokukhetha ezimbini. Ukuba ujonge ukubandakanyeka kurhwebo losuku, emva koko unokuluthengisa ngokuchasene nezinye i-cryptocurrensets ezinje nge-Ethereum.
Qaphela: Ukuba ujonge ukuba yi-Bitcoin 100% kwaye uyithengise ngemali ye-fiat efana nedola yase-US, kuya kufuneka uyenze nge-BTC / USDT pair. I-USDT yimali yedijithali eyaziwa ngokuba yiTether ekhonkxwe kwidola yaseMelika.
Kwangokunjalo, ukuba ufuna ukuthengisa i-Bitcoin yakho ngokuchasene nedola yase-US, ungakwenza oku kutshintsho lwakho olukhethiweyo lwe-imali yedatha. Inketho yesibini kukurhoxisa i-Bitcoin yakho kwisipaji sakho sabucala ukuze sigcinwe. Olu khetho lolwabo banqwenela ukutyala imali kwi-Bitcoin ekuhambeni kwexesha, ngethemba lokuba kwixa elizayo kuya kubaluleka ngakumbi.
Ukurhweba ngeBitcoin CFDs
Ukuba ungumtyali mali onamava okhangela ukufikelela kwisithuba seBitcoin ngosuku lokuthengisa, singacebisa ukuba siqwalasele iiCFD (ikhontrakthi-yomahluko). Ii-CFD zikuvumela ukuba uqikelele kwixabiso elizayo le-asethi ngaphandle kokufuna ukuyigcina okanye ukuyigcina. Ayizizo kuphela iiCFD ezikhoyo kwibala leBitcoin, kodwa phantse lonke udidi lweeasethi ezinokuthengiswa ezikhoyo.
Nokuba zizitokhwe kunye nezabelo, igolide, ioyile, irhasi yendalo, okanye ii-S & P 500-CFDs zikuvumela ukuba uthengise iiasethi ngokucofa iqhosha. Izibonelelo zokuthengisa iBitcoin ngomthengisi weCFD zininzi. Okokuqala nokuphambili, ngokungafaniyo notshintshiselwano lwenkampani yesithathu, ishishini lokurhweba ngeCFD yindawo yemfazwe elawulwa kakhulu.
Umzekelo, e-UK bonke abarhwebi be-CFD kufuneka babambe iphepha-mvume kwiGunya lokuZiphatha kwezeMali. Oku kukunika uluhlu lwezikhuselo ezilawulayo ezingazukufumaneka kutshintshiselwano nge-imali yedatha. Okwesibini, amaqonga e-CFD axhasa iindlela zokuhlawula zemihla ngemihla njenge-debit / ikhadi lekhredithi, ukuhanjiswa kwebhanki, kunye ne-e-wallets njengePayPal.
Kananjalo, akukho sidingo sokuthenga iBitcoin ukuqala ukurhweba ngayo. Endaweni yoko, kufuneka uvule iakhawunti, ubeke imali, emva koko uthenge iBitcoin CFD kwangoko. Oku kuyinzuzo xa kuziwa ekuvaleni urhwebo lwakho. Awuyi kuzikhathaza ngokudlulisela iingeniso zakho zeBitcoin kwisipaji sedijithali. Endaweni yoko, amaqonga e-UK CFD aya kwenza ibhalansi, inzuzo kunye nelahleko kwi-GBP.
Njengoko imeko yotyalo-mali yedijithali iye yanda ngakumbi-sasaza, Ukutshintshiselana nabarhwebi ngoku banikezela ngezixhobo zemali ezintsonkothileyo. Oku kubandakanya imarike yexesha elizayo kuzo zombini i-CME kunye ne-CBOE- ezizezona ndawo zimbini zotshintshiselwano ezinkulu kwihlabathi liphela. Xa kuthethwa oko, ngelixa i-CME kunye ne-CBOE zilungiselelwe abatyali mali beziko, unokufikelela kwiimarike zeBitcoin zexesha elizayo njengomtyalomali wentengiso.
Nanku umzekelo wendlela urhwebo lweBitcoin lwexesha elizayo olunokuthi luphume ngayo.
Umzekelo woRhwebo lweBitcoin lwexesha elizayo
Masithi uyanyusa kwicala elizayo leBitcoin. Kananjalo, uthatha isigqibo sokutyala imali kwikontrakthi yexesha elizayo. Ikhontrakthi inomhla wokuphela kweenyanga ezintathu, oko kuthetha ukuba uya kunyanzelwa ukuba uthengise ikhontrakthi ngomhla, okanye ngaphambili, kumhla wokuvuthwa. Ixabiso lesivumelwano seBitcoin yi- $ 8,000.
Uthenga iikhontrakthi ezi-2 zexesha elizayo kwi-8,000 yeedola nganye.
Nangona oku kufikelela kubungakanani bezorhwebo eyi- $ 16,000, uyakufuneka kuphela ukuba ubeke umda omncinci.
Uthatha isigqibo sokuvumela ikhontrakthi ukuba iqhubeke ikhule, njengoko ixabiso leBitcoin lihlanganisene.
Xa ikhontrakthi iphela kwiinyanga ezintathu, ixabiso leBitcoin yi- $ 10,000.
Oku kuthetha ukuba ikhontrakthi nganye ixabisa i-2,000 yeedola ngaphezulu kwexabiso ohlawule ngalo.
Uneekhontrakthi ezi-2 zexesha elizayo, oko kuthetha ukuba inzuzo yakho yomnatha iyi- $ 4,000.
Kwangokunjalo, ukubeka kunye nokukhetha umnxeba kufikelele nakwindawo yotyalo-mali yeBitcoin. Oku kukuvumela ukuba uhlawule 'ipremiyamu' - ethi ke ikunike ukhetho, kodwa hayi uxanduva, lokuthenga iBitcoin ngomnye umhla.
Nanku umzekelo wendlela urhwebo lweBitcoin olunokuthi luphume ngaphandle.
Umzekelo woRhwebo loKhetho lweBitcoin
Nangona kungasasazwanga ngokubanzi njengekamva, ukhetho lweBitcoin luyafumaneka kumaqonga orhwebo. Ingcamango ephambili kukuba uhlawula i-premium kwi-Bitcoin ukufikelela kwiimarike ezikhethiweyo. Umzekelo, masithi iBitcoin ixabisa i-10,000 yeedola, kwaye ixabiso lesitrayikhi li- $ 11,000. Ipremiyamu kukhetho lokufowuna ziisenti ezili-10 kwidola.
Ufuna ukubeka emngciphekweni i- $ 300 ngokuthenga ukhetho lweBitcoin
Oku kukunika ukufikelela kwi-Bitcoin eyi- $ 3,000. Inye kuphela yezinto ezimbini ezinokwenzeka.
Ukuba iBitcoin ayilibethi ixabiso lesitrayikhi le- $ 11,000 ngaphambi kokuba ikhontrakthi iphele, uya kuphulukana nepremiyamu yakho eyi- $ 300.
Imeko yesibini-yile nto ubuya kuba nethemba layo, kukuba iBitcoin igqithe kwixabiso lesitrayikhi se- $ 11,000.
Masithi emva kweeveki ezimbini, iBitcoin ihleli kwi-12,000 yeedola.
Ugqithisile kwixabiso lesitrayikhi, ke uthatha isigqibo sokukhuphela utyalo-mali lwakho kwinzuzo.
I-premium obuyibhatala ngaphambili ikunika ilungelo lokuthenga i-Bitcoin, nangona kunjalo, uya kuhlawula i-11,000 yeedola, ngokuchasene nexabiso langoku lemarike le- $ 12,000.
Iintlawulo zeBitcoin zokurhweba
Njengokuba kunjalo kulo naluphi na udidi lweeasethi onqwenela ukurhweba ngazo kwi-Intanethi, kuya kufuneka uthathe ingqwalaselo malunga nemirhumo. Oku kunokuza kwiifom ezahlukeneyo, ke qiniseka ukuba ufunda la manqaku alandelayo.
F Ipesenti yentlawulo
Eyona ntlawulo ixhaphakileyo oza kudibana nayo xa uthengisa i-Bitcoin kwi-intanethi yintlawulo yepesenti. Umrhumo ubalwa ngokuchasene nobungakanani beodolo yakho, kwaye kuya kufuneka uyihlawule kabini. Uya kuyibhatala xa uqala ukuvula urhwebo, kwaye naxa uwuvala.
Umzekelo, masithi imali yokurhweba ifikelela kwi-1%. Ukuba ubunokuthenga i-Bitcoin eyi- £ 250, ubunokuqala ukuhlawula i- $ 2.50 kwimirhumo. Ukuba ixabiso lotyalo-mali likhule laya kwi- £ 400, kwaye uthathe isigqibo sokuvala urhwebo ukuze uqonde inzuzo yakho, uya kuthi ke uhlawule i- $ 4 kwimirhumo.
Amanye amaqonga orhwebo eBitcoin aya kukuhlawulisa umrhumo othe tyaba ngalo lonke ixesha ubeka urhwebo. Umzekelo, masithi umrhwebi uhlawulise i- $ 4.50 ngorhwebo ngalunye. Nokuba ubungakanani beodolo yakho, uya kuhlawula i- $ 4.50 xa uthenga iBitcoin, kunye ne- $ 4.50 kwakhona xa uyithengisa. Inkqubo yemirhumo ethe tyaba iluncedo ngakumbi kwabo bathengisa izixa ezikhulu ngokwenene.
Amaqonga amaKhomishini aSimahla
ezinye yorhwebo ntengiso amaqonga ngoku akuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise i-Bitcoin ngaphandle kwekhomishini. Oku kuthetha ukuba awuyi kuhlawula umrhumo wokurhweba nakweyiphi na isiphelo sorhwebo lwakho, okuhle. Nangona kunjalo, abathengisi be-newbie bahlala belibala ngokusasazeka, kuba le yimirhumo oyakuhlawula ngokungathanga ngqo.
Nokuba uthengisa ngantoni, kuya kuhlala kusasazeka. Lo ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' leasethi kunye nexabiso 'lokuthengisa'. Ungabala ukusasazeka ngokweepesenti, ethi ke ikunike isibonakaliso esicacileyo sokuba uhlawula malini kwimirhumo.
Umzekelo, ukuba masithi umahluko kwintengo yokuthenga kunye nokuthengisa ye-Bitcoin yafikelela kwi-1.5%. Ukuba uqhubeke ixesha elide kwiBitcoin, uya kudinga ixabiso lokunyuka nge-1.5% ubuncinci ukuze uphule.
Kananjalo, ukuba ukhe wazibuza ukuba kutheni uhlala ubomvu ngokukhawuleza xa urhwebo lwenziwa, oku kungenxa yokusasazeka!
Fe Imirhumo yezemali
Ukuba ucwangcisa ukurhweba nge-Bitcoin, kuya kufuneka uphinde uvavanye ukuba yeyiphi imali yokuhlawulisa iqonga. Oku kusebenza ngohlobo olufanayo kwimali mboleko, hayi ubuncinci kuba uboleka imali ebekiweyo kumthengisi.
Imirhumo yezemali iya kwahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lweasethi oyithengisayo, nangona kwimeko yeBitcoin, kusenokwenzeka ukuba ibize.
Ngapha koko, iintlawulo zemali zixhomekeke kwipesenti yesixa osibolekayo. Umzekelo, umrhwebi angahlawulisa iipesenti ezi-6 ngaphezulu konyaka, kwaye uya kuhlawula umyinge we-pro-rata yosuku ngalunye ogcina urhwebo oluvunyiweyo luvulekile.
Ngaba ndingathengisa iBitcoin ngeNqanaba?
Inani lamaqonga orhwebo lweBitcoin ngoku likuvumela ukuba uthengise ngobungakanani. Isixa sombane oza kukwazi ukufumana siya kuxhomekeka kuluhlu lwezinto. Kuqala, ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa iqonga elilawulwayo leCFD ukuthengisa iBitcoin, umthengisi kuya kufuneka athobele imigaqo ebekwe liGunya lezoKhuseleko laseYurophu (i-ESMA).
Oku kuchaza ukuba abatyali zimali abathengisayo babanjiwe ukunyusa amanqanaba e-2: 1 kuphela xa kuthengiswa iBitcoin kunye nezinye izinto ezigcina imali. Nangona kunjalo, ukuba ubuqonda kakuhle ubungozi, kwaye ujonge ukusebenzisa amanqanaba aphezulu kakhulu okusebenzisa, ungasebenzisa iqonga elivela kwi-crypto.
Qaphela: Njengokuba uzama njengokufumana amandla, ungaphulukana nemali eninzi ukuba urhwebo lwakho luchasene nawe. Ngapha koko, uya kuphulukana nesibonda sakho xa urhwebo lwakho luphelisiwe, ke nyathela ngononophelo olukhulu.
Amaqonga anje asebenza ngokukodwa kwiidiphozithi ze-cryptocurrency kunye notsalo, oko kuthetha ukuba akukho mfuneko yokuba bathobele imigaqo efanayo nabarhwebi abasekwe kwi-fiat. Kananjalo, unokurhweba ngeBitcoin ngomyinge wokufikelela kwi-100: 1.
Ulikhetha njani iqonga lokuthengisa ngeCrypto?
Ukuba usifundile isikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, kuyathenjwa ukuba ngoku unokuqonda okuqinisekileyo ukuba yintoni intengiso yeBitcoin. Ukuba ngoku ukwinqanaba apho ufuna ukuqala umsebenzi wakho wokurhweba ngeBitcoin, kuya kufuneka ukhethe iqonga.
Ngamakhulu otshintshiselwano kunye nabarhwebi ngoku abasebenza kwintengiso, ukwazi ukuba leliphi iqonga lokuhamba nayo akukho nto elula. Kananjalo, singacebisa ukuba siphonononge ezi ndlela zilandelayo ngaphambi kokuvula iakhawunti entsha.
Br Umlawuli weCFD oMiselweyo okanye uTshintshiselwano ngeDijithali yemali?
Okokuqala nokuphambili, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyafuna na ukuxhamla kwi-Bitcoin CFD, okanye ukuba ufuna ukuba yiBitcoin kwaye uyithengise nezinye iimali. Ukuba ukhetha ii-CFDs, uya kuba usebenzisa umthengisi weCFD olawulwayo onikwe iphepha-mvume nguGunyaziwe wokuziphatha kwezeMali (i-FCA)
Ngokuchasene noko, bambalwa kakhulu otshintshiselwano nge-imali yedatha yokubamba abanamaphepha-mvume olawulo, ngakumbi e-UK. Nangona kunjalo, lo ngumngcipheko oya kuyidinga ukuba ufuna ukurhweba ngeBitcoin ngendlela yayo.
Kuya kufuneka ucinge ngenkxaso mali. Umzekelo, ingaba uzimisele njani ukufaka imali kwiakhawunti yakho yorhwebo? Ukuba ufuna ukusebenzisa yonke imihla ngetyala / ikhadi lebhanki, ukuhanjiswa kwebhanki, okanye -e-wallet, olona khetho lwakho luza kuba ngumthengisi weCFD. Abarhwebi abalawulwayo banemali esemthethweni yokuxhasa imali ye-fiat.
Ngenye indlela, ezinye i-crypto exchanges zikuvumela ukuba ubeke imali kwiakhawunti yebhanki. Imirhumo ihlala incinci, nangona kuya kufuneka ulinde iintsuku ezimbalwa ukuze imali icace.
Uya kuhlala uhlawula iifizi zokurhweba xa uthenga kwaye uthengisa i-Bitcoin kwi-intanethi-nokuba ukhetha umrhwebi ongenakhomishini. Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka ukhethe iqonga elinikezela ngesakhiwo samaxabiso ukulungiselela iimfuno zakho. Umzekelo, ukuba ufumanisa ukuba urhweba ngokwenani elikhulu, kungangcono usebenzise umrhwebi ohlawulisa iikhomishini zomrhumo.
Kwelinye icala, ukuba ungumrhwebi we-newbie onqwenela ukutyala imali encinci, uya kuba ulunge ngakumbi kwimali eguquguqukayo yepesenti. Nokuba yeyiphi indlela, ungalibali malunga nokusasazeka!
Inani leBitcoin ezibini
Njengoko uza kuthengisa iBitcoin ngokuchasene nenye imali, kuya kufuneka uphonononge ukuba zingaphi izibini zokurhweba umrhwebi ekubhekiswa kuye. Umzekelo, ujonge ukurhweba ngeBitcoin ngokuchasene nezinye iimali ze-fiat ezinje nge-USD kunye ne-GBP?
Kungenjalo, ngaba ubuceba ukuthengisa iBitcoin ngokuchasene nezinye iimali zedijithali ezinje nge-Ethereum? Ngokubaluleka, jonga indawo yokurhweba ngaphambi kokuba ubhalise.
Abarhwebi abaphumeleleyo baya kuhlala besebenzisa izixhobo zohlalutyo lobuchwephesha. Nangona ekuboneni kokuqala kunokubonakala ngathi kuyabhidisa, kubalulekile ukuba uqonde indlela ezithandwa ngayo iiAxpressential Averages kunye nezixhobo zeFibonacci Retracement.
Ezi zixhobo zikuvumela ukuba uhlalutye amaxabiso embali ngendlela enzulu, ke ngoko sikhetha amaqonga orhwebo anikezela ngemfumba yezalathi.
Kukwaluncedo ukuba iqonga lokuthengisa iBitcoin libonelela ngezixhobo zophando ezihlaziyiweyo. Ubuncinci, oku kufanele kubandakanya imicimbi yeendaba efanelekileyo enokuthi ibe nefuthe ngqo kwixabiso leBitcoin.
Umzekelo, xa iKhomishini yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano (i-SEC) yale i-Bitcoin edumileyo ETF Isicelo kulo nyaka uphelileyo, iimarike zaphendula kwangoko ngokwenza intengiso enkulu. Kananjalo, uyakufuna iqonga lokurhweba elikunika ukufikelela kwexesha-lokwenyani kwimicimbi ebalulekileyo.
Iindawo eziGqibeleleyo zokuThengisa iBitcoin kunye namaQonga ama-2021
Ngaba ungaqinisekanga ukuba leliphi iqonga lokurhweba leBitcoin oza kuhamba nalo? Ngelixa singacebisa ukuba wenze ukukhuthala kwakho eqongeni ngaphambi kokuba ubhalise, apha ngezantsi sidwelise ezona zintathu ziphezulu ze-2021.
Ayisiyiyo kuphela ukuba ungaqala ngalo broker ngee-100 nje zeedola, kodwa ungathengisa simahla ngeziko leakhawunti yedemo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, lo broker ulawulwa ngumzimba we-ASIC ..
Ndingathengisa ngantoni neBitcoin?
I-Bitcoin inokuthengiswa ngokuchasene nazo zombini i-fiat currencies (njenge-USD kunye ne-GBP) kunye nezinye i-cryptocurrensets (ezinje nge-Ethereum kunye neRipple).
Ngaba i-margin margin yorhwebo yinto?
Njengodidi lweeasethi ezixabisa iibhiliyoni ezininzi, kuya kuza kungabikho kungxamela ukufunda ukuba ungazibandakanya kurhwebo lwemida yeBitcoin. Ukuba usebenzisa i-CFD broker elawulwayo enelayisensi yi-FCA, uya kuthi uthabathe inyathelo lokufumana nje i-2: 1. Nangona kunjalo, ukuba usebenzisa iqonga elivela kwi-crypto, unokufumana amandla okufikelela kwi-100: 1.
Yiyiphi idiphozithi encinci efunekayo kwindawo yokuthengisa yeBitcoin?
Ubuncinane beedipozithi zichazwe kwindawo yorhwebo ekuthethwa ngayo. Ukuba ukufaka imali ngeBitcoin, kuhlala kungekho mali incinci yedipozithi. Kwicala elisezantsi, abathengi beCFD bahlala befuna idipozithi ubuncinci be- $ 100 ubuncinci.
Ngubani olawula iisayithi zokuthengisa zeBitcoin e-UK?
Igunya lokuZiphatha kwezeMali linoxanduva lokulawula i-CFD brokers e-UK. Nangona kunjalo, ukutshintshiselana nge-cryptocurrency akulawulwa e-UK, ke yithathele ingqalelo le nto ..
Ngaba ndingarhweba ngeBitcoin 24/7?
Ngokungafaniyo nokutshintshiselana ngokwesitokhwe ngokwesiko njenge-NYSE kunye ne-LSE, iBitcoin inokuthengiswa nge-24/7. Nangona kunjalo, amanani okuthengisa asezantsi kakhulu ngeempelaveki, ke lindela amanqanaba aphezulu okunyanzeleka ..
Yintoni i-Bitcoin CFD?
Ukuba ujonge ukufikelela kwindawo yokurhweba yeBitcoin ngexesha elifutshane, isiseko sokuqikelela, iiCFD lukhetho oluhle kakhulu. Ayisiyo kuphela imirhumo esezantsi, kodwa ungaphuma kurhwebo lwakho ngonqakrazo lweqhosha. Ngaphaya koko, iiCFD broker zilawulwa.
Eyona ndlela ilula yokufumana iBitcoin emfutshane kukuthengisa i-CFD. Xa ufuna ukuphuma kurhwebo lwakho, uthenga i-CFD kwakhona. Kananjalo, inkqubo yokurhweba ubukhulu becala iyafana nokuhamba ixesha elide, nangona kunjalo, ukubuyela umva.